Iyo ngamera, nzira inoshanda kwazvo yekufambisa | Absolut Kufamba
Daniel | | Ijipiti
Kubva panguva dzekare kwazvo, pamwe makore anoda kusvika zviuru zvitatu apfuura, vanhu vanga vachishandisa iyo ngamera senzira inoshanda yekufambisa mune mamwe matunhu epasi.
Idzi mhuka dzine mahwanda dzinozivikanwa nemafuta ekuisa (humps) ichibuda kubva kumusana kwayo, yakagadziriswa nemurume zviuru zvemakore apfuura. Ivo vave, uye vachiri, sosi yekudya (mukaka nenyama), nepo ganda ravo rave kuchishandiswa kugadzira zvipfeko. Asi pamusoro pezvose, kushandiswa kwayo kwakanyanya senzira yekufambisa. Ose kuvonga avo chaiwo maitiro, anonyanya kuchinjirwa ku nzvimbo dzinogara vanhu mugwenga.
1 Mangani marudzi engamera aripo?
2 "Chikepe chegwenga"
3 Ngamera sechombo chehondo
Mangani marudzi engamera aripo?
Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti haasi makamera ese epanyika akafanana, uye haashandiswe senzira yekufambisa. Ivo varipo munyika marudzi matatu ngamera:
Ngamera yeBactrian (Camelus bactrianus), iyo inogara muCentral Asia. Yakakura uye inorema kupfuura mamwe marudzi. Ine hump huviri uye ganda rayo rine mvere.
Ngamera yemusango bactrian (Camelus ferus), zvakare nemahumpu maviri. Iyo inogara murusununguko mumapani erenje eMongolia uye mune dzimwe nzvimbo dzemukati meChina.
Ngamera yeArabhiya o Dromedary (Camelus dromedarius), iyo inonyanya kufarirwa uye yakawanda mhando, ine huwandu hunofungidzirwa hwepasi rose hwemamirioni gumi nemaviri. Ine hump imwechete. Inowanikwa munzvimbo yese yeSahara uye Middle East. Izvo zvakare zvaziviswa muAustralia.
Ngamera inogona kusvika kumhanya anosvika makiromita makumi mana paawa uye inokwanisa kumira kwenguva yakareba isina kumesa donhwe rimwe remvura. Dromedary semuenzaniso inogona kurarama zvakakwana kungonwa kamwe chete mazuva gumi. Kuramba kwaro kupisa kunoshamisa: inogona kurarama munzvimbo inopisa kwazvo yemagwenga kunyangwe mushure mekurasikirwa kusvika pamakumi matatu muzana emuviri wayo.
Bactrian ngamera dzichinwa
Mhuka idzi dzinokwanisa sei kurarama nemvura shoma kudaro? Chakavanzika chiri mu mafuta izvo zvinounganidzwa mumatumbu adzo. Kana muviri wengamera ichida hydration, iwo mafuta ane munyama mune aya madhipatimendi anogadziriswa kuburitsa mvura. Kune rimwe divi, itsvo dzako uye ura zvine mukana wakakura wekutorazve mvura.
Asi hazvireve kuti ngamera inogona kurarama isina mvura. Kana yakwana nguva yekudiridza, mazana matanhatu kg kamera ngamera inogona kunwa inosvika mazana maviri emalita mumaminetsi matatu chete.
Uku kukurira kukuru kune nyota uye kupisa, zvisingawanikwe mukuwana mune zvakawanda zvipuka, yakashongedza iyi mhuka se shamwari yepamwoyo murume kurarama murenje.
Kwemazana emakore, makaravhani Vatengesi vaishandisa ngamera kuyambuka nzvimbo huru dzerenje. Kutenda kwaari, zvaigoneka kumisikidza migwagwa uye zvekutengeserana uye zvetsika kutaurirana zvaigona kunge zvisingaite neimwe nzira. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ngamera chave chinhu chakakosha kusimudzira nzanga zhinji dzevanhu muAsia neNorth Africa.
Kana renje raive gungwa rejecha, ngamera ndiyo chete nzira yekufamba nayo uye garandi yekusvika pachiteshi chakachengeteka. Nechikonzero ichi inozivikanwa seye "Ngarava yerenje".
Ngamera caravan kuyambuka gwenga
Kunyangwe nanhasi, apo mota dzenzvimbo dzese uye GPS dzakabudirira kuzvitsiva senzira yekufambisa, ngamera ichiri kushandiswa nemadzinza mazhinji eBedouin. Zvisinei, zvakajairika kumuona mune dzimwe nyika mune rake idzva basa se kukwezva kwevashanyi kupfuura semotokari.
Zvakajairika kuti, parwendo rwavo kunzvimbo dzakadai seMorocco, Tunisia, Egypt kana United Arab Emirates, vashanyi vanobhadhara ngamera nzendo dzinopfuura nemurenje. Navo (nguva dzose iri mumaoko evatungamiriri vane ruzivo), vafambi vachitsvaga manzwiro vanopinda munzvimbo dzisina chinhu uye dzisingagare, gare gare vachirara mumatende pasi penzvimbo ine nyeredzi yemugwenga. Iyo ngamera iri, mushure mezvose, mucherechedzo wenguva refu-yakakanganikwa yenguva dzerudo uye zvisinganzwisisike zviitiko.
Ngamera sechombo chehondo
Pamusoro pekubudirira kwayo senzira yekufambisa, ngamera yakashandiswa zvakare munhoroondo yese se chombo chehondo. Nechekare mune Antiquity iyo Achaemenid Persia Vakawana mhando yemhuka idzi dzaibatsira kwazvo muhondo yavo: kugona kwake kutyisa mabhiza.
Nekudaro, kutora chikamu kwevarwi vakatasva ngamera muhondo zhinji kwakave kwakakurumbira, mushonga wakakwana wekutadzisa vatasvi vemabhiza emuvengi. Zvinyorwa zvekare zvakawanda zvinopupurira chinzvimbo chemakamera mukukunda humambo hwaRidhiya muzana ramakore rechitanhatu BC.
Ngamera uye dromedaries anga ari chikamu chemauto akarwa mu North Africa uye Middle East kubva nguva dzeRoma zvisati zvaitika uye kusvika nguva dzichangopfuura. Kunyange uto re United States yakagadzirwa muzana ramakore rechiXNUMX yakakosha kamera yengamera iyo yaakatumira mudunhu reCalifornia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iyo ngamera, nzira inoshanda kwazvo yekufambisa
korari sebas akadaro
kuti kana iri imwe waveaaaaaaaaaa
Pindura sebas coral
sebas akadaro akadaro
Pindura kune sebas akadaro
Dambudziko rekutanga reMoroccan